Roobab watay daadad ayaa waxa uu ka da ay gobalka awdal ayaa dhaliyey qasaaro dhimasho iyo burbur hantiyadeed – STAR FM SOMALIA
Roobab watay daadad ayaa waxa uu ka da ay gobalka awdal ayaa dhaliyey qasaaro dhimasho iyo burbur hantiyadeed
Roobab lixaad leh oo daadad watay ayaa shalay gelinkii dambe ka da’ay deegaano ka tirsan Gobolka Awdal, halkaasoo muddooyinkii u dambeeyay abaaro ku dhifteen.
Illaa lix ruux ayaa ku geeriyootay roobabka daadadka watay, kuwaasoo isugu jiray caruur iyo dad waayeelo ah.
Guddoomiyaha Gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan Rabaax ayaa sheegay in roobabkan ay shalay gelinkii dambe ka bilowdeen deegaanka Dilla oo u dhow Boorama.
Waxaa uu sheegay in roobabkan ay jebiyeen balliyo ku yaalla dhanka sare ee deegaanka Dilla, taasna ay keentay in waxyeelo ay soo gaarto goobo ganacsi iyo guryo.
Dad dhowr ah oo geedo dhaadheer ka koray daadadka ayaa la soo bad baadiyay, sida uu sheegay Guddoomiyaha Gobolka
Maamulka Gobolka Awdal ayaa bishii hore ku dhawaaqay in xaalad deg deg ah oo dhinaca abaaraha, iyadoo dad dhowr ah ay u dhinteen abaarta ku dhufatay deegaano ka tirsan Awdal.
Maamulka Gobolka Banaadir oo mamnuucay baabuurta aan laheyn Taargo Nambar